Kusawirirana muCOPAC Komisa Zvakare Kunyorwa kweBumbiro Idzva
Chikumi 15, 2011
Komiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCOPAC, inoti yambomira basa rekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo nekuda kwekusawirira pakati pemapato matatau ari kutungamira hurongwa uhwu.
MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai iri kupomera Zanu PF mhosva yekuramba zvavakambowirirana pakuiswa mumadingindira zvakabva muvanhu, izvo zvaita kuti vashandi vanga vachiita basa iri, vambomiswa basa.
Danho ratorwa neCOPAC iri rinodzorera shure zvisungo zvakaitwa kumusangano weSADC kuSouth Africa mukupera kwesvondo, izvo zvakakurudzira kuti zviri muGPA zvizadziswe nekukurumidza, kusanganisirawo hurongwa hwebumbiro remitemo idzva.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaDouglas Mwonzora veMDC-T, vaudza Studio 7 kuti kusawirirana uku kwakwidzwa kuvakuru veCOPAC, avo vari kutarisirwa kusangana nechimbichimbi kuti vazeye nyaya iyi.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, vachimirira Zanu PF, VaMunyaradzi Paul Mangwana, vaudza Studio7 kuti vari kuramba vachirasikirwa nemazuva avanofanirwa kunge vachiita basa nekuda kwekuramba vachinetsana uku.